Madasha Xisbiyada Muqdisho oo ku baaqay in ay iscasilaan G.Doorashada – Idil News
Madasha Xisbiyada Muqdisho oo ku baaqay in ay iscasilaan G.Doorashada
Posted By: Jibril Qoobey June 29, 2020
Dhinaca kale, qoraal kooban oo ay Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashada, Xaliima Ismaaciil ku qortay Twitter-ka ayay ku sheegtay in guddigu yahay mid madax-banaan ayna sii ahaan doonaan.
“Howsheennu waa in aan hergelinno hannaan doorasho oo hufan, loo dhan yahay oo ay ku dhacda hab daacad ah. Muddo aad u dheer, qarankeennu waxa uu dadkiisa u diiday xuquuqdooda aasaasiga ah ee ay ku soo dooran lahaayeen musharraxa ay doonayaan,” ayay tiri Xaliima Yarey.
Xaliima Ismaaciil ayaa ugu baaqday dhinacyadu in ay Guddiga ku garab siiyaan sidii “doorashadan taariikhiga ah looga dhabeyn lahaa. Guddigu wuxuu sii wadi doonaa inuu u hogaansamo dastuurka iyo dhammaan shuruucda kale ee dalka,” ayay tiri gudoomiyaha Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka.